Mandoro ny taona teo aloha: Fomban-drazana amin’ny taombaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Avrily 2019 3:52 GMT
Any amin'ny firenena maro ao Amerika Atsimo, nanjary fomba amam-panao ny mandoro zavatra endrika olombelona tamin'ny taona lasa, izay fomba hanafoanana ny zava-dratsy rehetra nentin'ny taona, ary mamela lalana ho an'ny zava-baovao. Mampiseho ny sasany amin'ireo fomban-drazana ireo sy ny adihevitra sasany naterak'izany ny lahatsary eto ambany. Avy amin'i cirofono ny sary etsy ambony ary mampiseho ny filohan'i Venezoela, Hugo Chávez. Nampiasaina araka ny lisansa Creative Commons Attribution ny sary.
Ao Goatemala, atao ny faha-7 ny volana Desambra ny fandoroana, andro hanambaran'izy ireo fa nandresy ny devoly ny virjiny. Ny zavatra ataon'izy ireo dia mandoro ny zavatra rehetra taloha, simba sy tsy ampiasaina intsony ao an-tranon'izy ireoy, satria mino izy ireo fa miafina ao anatin'ireo zavatra ireo nandritra ny taona ny devoly, ary amin'izany andro izany, rehefa izy no malemy tanteraka, dia afaka mamoaka azy hiala ny trano. Na izany aza, maro ireo hafa mividy piñatas na sary sokitra devoly hodorana, mba hitazonana ny fomban-drazana. Mampiseho ny iray amin'ireo afom-pifaliana miaraka amin'ny sary devoly napetraka eo ambony ity lahatsary manaraka ity:
Amin'ny teny Anglisy ny lahatsary manaraka izay ilazana ny tantara ao ambadiky ny fandoroana devoly, ary maneho fomba fijery vaovao momba ny fandoroana: misy ny ahiahy fa manimba ny tontolo iainana ny fombafomba satria mandoro fako be loatra ao an-tranony ny olona, na inona na inona fitaovana, ary nipoitra ny adihevitra hafa: na dia maro Katolika aza i Goatemala, dia mino ireo kristianina evanjelika fa raha ny tena marina, fiderana sary sokitra ny fandoroana “, ary mihevitra fa tsy tokony hatao ny fomban'ny mpanompo sampy.
Ao Ekoadaoro, dorana iray andro mialoha ny taombaovao ilay zavatra, ary tsy voafetra ho endrika devoly ihany, fa mety amin'ny endrika samihafa. Ny sasany dia vita amin'ny akanjo tranainy nofenoina hazo, gazety sy fitaovana hafa mora mirehitra, ny hafa vita amin'ny taratasy gazety sy baoritra. Nalaina avy amin'ireo olo-malaza amin'ny fahitalavitra ny sasany araka ny hitanao ao amin'ity lahatsary nalain'i lizgaba teny an-dalana ity mba handraketana ireo saribakoly “año viejo” samihafa azo vidiana:
Ao Ekoadaoro, tsy ny devoly ihany no endrika maneho ny fandoroana ny taona lasa, fa misy ireo zatovolahy midina an-dalambe miakanjo toy ny mpitondratena mitomany ny taona maty ary ny sasany aza mangata-bola mihitsy. Ao amin'ny lahatsary manaraka avy amin'ny MegaSans, mampiseho saribakoly samihafa ary koa mpitondratena ny fitsidihana ny tanànan'i tanànan'i Quito, Ekoadaoro :
Any Kolombia, ao an-tanànan'i Mocoa ao Putumayo, misy ny filaharana ahitana ireo mpilatron'ny Taona Fahiny avadika tabilao, na natao hampisehoana ny zava-nitranga tamin'ny taona teo aloha. Aorian'ny filaharana, vakiana ireo sitrapo farany mahatsikaiky sy ireo didim-pananana tamin'ny taona maty ary mandoro ny saribakoly mpilatron'ny taona fahininy ny olona amin'ny misasakalina, araka ny hitanao ao amin'ny lahatsary manaraka:
Ahoana ny fandaozana ny taona any amin'ny tany niavianao?